Diyaaradaha Ruushka Oo Duqeeyay Isbitaalo Xalab Ku Yaala. – Bogga Calamada.com
Diyaaradaha Ruushka Oo Duqeeyay Isbitaalo Xalab Ku Yaala.
Diyaaradaha dagaalka Dowladda Ruushka ayaa duqeeyay Seddax Isbitaal oo kuyaalla magaalada Xalab ee Waqooyiga dalka Suuriya, waxaana duqeymo kala duwan oo magaaladaas ka dhacay maalintii shalay ku nafwaayay inkabadan 20 ruux.
Wariyeyaasha ku sugan magaalada Xalab ayaa waxay sheegayaan in diyaaradaha Ruushka ay maalintii shalay duqeeyeen Seddax ka tirsan Isbitaallada Caafimaadka ee kuyaalla Xaafadaha ay Mucaaradka maamulaan ee magaaladaasi.
Goobaha Caafimaadka ah ee la duqeeyay waxaa ka mid ah Isbitaalka weyn ee kuyaaalla Xaafadda Al-Saakhuur. Wararku waxay intaas ku darayaan in Isbitaalkaasi uu qeyb ahaan bur buray, iyadoona ay dhaawacmeen qaar ka tirsan bukaannadii iyo Shaqaalihii Caafimaadka ee Xaruntaasi ka howl-galayay.
Diyaaradaha Ruushka iyo kuwa Nidaamka Bashaar Al-Asad ayaa bishii September ee lasoo dhaafay waxay sidan oo kale u beegsadeen dhowr Isbitaal oo kuyaalla magaalada Xalab.
Duqeymahan lagu qaaday Isbitaallada magaalada Xalab waxay qeyb ka tahay Xamlo ballaaran oo xagga cirka iyo dhulka ah oo billaabatay Seddax todobaad ka hor, taas oo lagu doonayo in Xaafadaha kuyaalla bariga magaaladaasi looga saaro inkabadan 275 kun oo rayid ah iyo Xoogagga Mucaaradka ee halkaas ka dagaallama.
Tan iyo waabarigii maalintii Jimcaha ee shalay, diyaaradaha Ruushka ayaa tobonaan weerar oo xagga cirka ah ka fuliyay magaalada Xalab, waxaana ay adeegsanayeen bam baanooyinka loo yaqaano Fos-forka iyo Kalaastar Bamka, iyadoona duqeymihii shalay dhacay ay ku nafwaayeen 24 ruux.
Kooxaha difaaca Madaniga ayaa isku dayaya in bur burka dhismayaasha hoostooda ay kasoo saaraan dadka ku waxyeeloobay duqeymaha is daba joogga ah ee ku soconaya magaaladaasi.
Dhinaca kalena Koox ka mid ah Xoogagga Kacdoonka ee ka dagaallama dalka Suuriya ayaa sheegtay in howl-gal gaar oo ay ka fulisay magaalada Xamaah inay ku dishay Saraakiil u dhashay Waddamada Ruushka iyo Iiraan.
Kooxdan oo lagu magacaabo â€œFeylaq Al-Shaamâ€ waxay qoraal ay soo saartay ay ku sheegtay in howl-gal amni ah oo si aad ah u qorsheysnaa inay ku dishay Lix ka tirsan Saraakiisha Ruushka ee ku sugan magaalada Xamaah, waxay sidoo kale tilmaantay in weerarkaas ay ku dishay Askar Iiraaniyiin ah oo ilaalo u ahaa Saraakiisha Ruushka.
Dowladda Ruushka ayaan illaa iyo hadda ka hadlin wararka sheegaya in Saraakiil Ciidan looga laayay dalka Suuriya, balse tani ma aha markii ugu horreysay oo Askar Ruush ah lagu dilo weerarro abaabulan oo ka dhaca dalkaasi, iyadoo horraantii Sanadkan Saraakiil Ruush ah lagu dilay howl-gal gaar ah oo ka dhacay Gobolka Laadiqiyah ee galbeedka Wadankaasi.